လက်တင်အမေရိက - ဝီကီပီးဒီးယား
Latin America[မှတ်စု ၁]
၁၉,၁၉၇,၀၀၀ km2 (၇,၄၁၂,၀၀၀ sq mi)
၆၂၆,၇၄၁,၀၀၀ (၂၀၁၅ ခန့်မှန်း)[မှတ်စု ၂]
၃၁/km2 (၈၀/sq mi)
စပိန် နှင့် ပေါ်တူဂီ အခြား:
Quechua, Mayan languages, Guaraní, ပြင်သစ်, Aymara, Nahuatl, အီတလီ၊ ဂျာမန်၊ အင်္ဂလိပ်၊ ဒတ်ချ်၊ ပိုလန်၊ ယူကရိန်း၊ Welsh, Yidish, တရုတ်
UTC-2 မှ UTC-8
၁။ Mexico City
၂။ São Paulo
၃။ Buenos Aires
၄။ Rio de Janeiro
၈။ Belo Horizonte
လက်တင်အမေရိက (အင်္ဂလိပ်: Latin America) ဟူသည် ရိုမန်ဘာသာစကား (အဓိကအားဖြင့် စပိန်နှင့် ပေါ်တူဂီဘာသာ) ကိုပြောဆိုသည့် အမေရိကရှိ နိုင်ငံများကို ညွှန်းဆို ခေါ်ဝေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တောင်ဘက်နယ်နမိတ်မှ တောင်အမေရိက တောင်ဘက် အစွန်းထိ (ကာရစ်ဘီယံဒေသ အပါအဝင်) ကျယ်ပြန့်ကာ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံပေါင်း ၂၀ ပါဝင်သည်။ ဧရိယာအားဖြင့် ၁၉,၁၉၇,၀၀၀ စတုရန်းကီလိုမီတာခန့် (၇,၄၁၂,၀၀၀ စတုရန်းမိုင်) ကျယ်ဝန်းကာ ကမ္ဘာ့ကုန်းမြေစုစုပေါင်းဧရိယာ၏ ၁၃% ခန့်ရှိသည်။ လူဦးရေမှာ ၂၀၁၃ ခုနှစ် စာရင်းများအရ ၆၀၄ သန်းကျော်ဖြစ်သည်။ "လက်တင်အမေရိက" ဟူသည့် အသုံးအနှုန်းကို ၁၈၆၁ ခုနှစ်တွင် စတင်အသုံးပြုခဲ့သည်။ 
ပထဝီဝင်၊ နိုင်ငံရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု စသည်တို့ကို အခြေခံ၍ လက်တင်အမေရိက ကို အမျိုးမျိုးခွဲခြားနိုင်သည်။ ပထဝီဝင်အားဖြင့် ပိုင်းခြားထားပုံမှာ မြောက်အမေရိက၊ ဗဟိုအမေရိက၊ ကာရစ်ဘီယံနှင့် တောင်အမေရိက ဟူ၍ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံရေးပထဝီဝင်အရ ခွဲခြားထားသည့် နယ်မြေဒေသများမှာ တောင်ပိုင်းကတော့ပုံဒေသ၊ ဂီယားနားနယ်များနှင့် အန်းဒီးဒေသ တို့ဖြစ်သည်။ ဘာသာဗေဒအားဖြင့် ပိုင်းခြားထားသည့် ဒေသများမှာ ဟစ်စပန်းနစ်အမေရိက၊ ပေါ်တူဂီအမေရိကနှင့် ပြင်သစ်အမေရိက တို့ဖြစ်ကြသည်။
အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံ ၂,၇၈၀,၄၀၀ ၄၁,၆၆၀,၄၁၇ ၁၄.၄ ဗျူနိုအေးရိစ်မြို့ Argentina
ဘိုလီးဗီးယားနိုင်ငံ ၁,၀၉၈,၅၈၁ ၁၀,၄၆၁,၀၅၃ ၉ ဆူးခရဲ့မြို့ Bolivia
ဘရာဇီး ၈,၅၁၅,၇၆၇ ၂၀၁,၀၃၂,၇၁၄ ၂၃.၆ ဘရာဇီးလီးလားမြို့ Brasil
ချီလီနိုင်ငံ ၇၅၆,၀၉၆ ၁၇,၅၅၆,၈၁၅ ၂၃ ဆန်တီယာဂိုမြို့ Chile
ကိုလံဘီယာနိုင်ငံ ၁,၁၄၁,၇၄၈ ၄၇,၃၈၇,၁၀၉ ၄၁.၅ ဘိုဂိုတာမြို့ Colombia
ကော့စတာရီကာနိုင်ငံ ၅၁,၁၀၀ ၄,၆၆၇,၀၉၆ ၉၁.၃ ဆန်ဂျို့စ်မြို့ Costa Rica
ကျူးဘားနိုင်ငံ ၁၀၉,၈၈၄ ၁၁,၀၆၁,၈၈၆ ၁၀၀.၆ ဟာဗားနားမြို့ Cuba
ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ ၄၈,၄၄၂ ၁၀,၂၁၉,၆၃၀ ၂၁၀.၉ ဆန်တိုဒိုမီဂိုမြို့ República Dominicana
အီကွေဒေါနိုင်ငံ ၂၈၃,၅၆၀ ၁၅,၄၃၉,၄၂၉ ၅၄.၄ ကွီတိုမြို့ Ecuador
အယ်ဆာဗေဒိုနိုင်ငံ ၂၁,၀၄၀ ၆,၁၀၈,၅၉၀ ၂၉၀.၃ ဆန်ဆာဗေဒိုမြို့ El Salvador
ပြင်သစ်ဂီယားနား* ၈၃,၅၃၄ ၂၅၀,၁၀၉ ၃ ခေအန်းမြို့ Guyane française
ဂွါဒီလု* ၁,၆၂၈ ၄၀၅,၇၃၉ ၂၅၀ ဘာ့စတဲမြို့ Guadeloupe
ဂွါတီမာလာနိုင်ငံ ၁၀၈,၈၈၉ ၁၅,၄၃၈,၃၈၄ ၁၂၉ ဂွါတီမာလာစီးတီး Guatemala
ဟေတီနိုင်ငံ ၂၇,၇၅၀ ၉,၉၉၆,၇၃၁ ၃၅၀ ပေါ့တ်အော်ရ်ပရင့်စ်မြို့ Ayiti, Haïti
ဟွန်ဒူးရပ်စ်နိုင်ငံ ၁၁၂,၄၉၂ ၈,၅၅၅,၀၇၂ ၇၆ တေဂူဆီဂါလ်ပါမြို့ Honduras
မာတီနစ်* ၁,၁၂၈ ၃၈၆,၄၈၆ ၃၄၀ ဖော့ဒီဖရန့်မြို့ Martinique
မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ ၁,၉၇၂,၅၅၀ ၁၁၈,၃၉၅,၀၅၄ ၅၇ မက္ကဆီကိုစီးတီး Estados Unidos Mexicanos
နီကာရာဂွါနိုင်ငံ ၁၃၀,၃၇၅ ၅,၇၈၈,၅၃၁ ၄၄.၃ မနာဂွါမြို့ Nicaragua
ပနားမားနိုင်ငံ ၇၅,၅၁၇ ၃,၆၆၁,၈၆၈ ၅၄.၂ ပနားမားစီးတီး Panamá
ပါရာဂွေးနိုင်ငံ ၄၀၆,၇၅၃ ၆,၈၀၀,၂၈၄ ၁၄.၂ အဆွန်စီယုန်းမြို့ Paraguay
ပီရူးနိုင်ငံ ၁,၂၈၅,၂၁၆ ၃၀,၄၇၅,၁၄၄ ၂၃ လီမာမြို့ Perú
ပေါ်တိုရီကို* ၉,၁၀၄ ၃,၆၁၅,၀၈၆ ၃၉၇ ဆန်ဝှမ်းမြို့ Puerto Rico
စိန့်ဘာသယ်လမီ* ၅၃.၂ ၃၆,၂၈၆ ၆၈၂ ဂစ်စတာဗီယားမြို့ Saint-Barthélemy
[[File:|23x15px|border |alt=Collectivity of Saint Martin|link=Collectivity of Saint Martin]] စိန့်မာတင်* ၂၅ ၉,၀၃၅ ၃၆၁ မာရီဂေါမြို့ Saint-Martin
ဥရုဂွေးနိုင်ငံ ၁၇၆,၂၁၅ ၃,၃၂၄,၄၆၀ ၁၈.၈၇ မွန်တီဗစ်ဒီအိုမြို့ Uruguay
ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံ ၉၁၆,၄၄၅ ၃၁,၆၄၈,၉၃၀ ၃၁.၅၉ ကရာကတ်စ်မြို့ Venezuela
စုစုပေါင်း ၂၀,၁၁၁,၄၅၇ ၆၀၃,၄၄၁,၅၉၅ ၃၀
*: အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံ မဟုတ်
↑ အဓိက လက်တင်အမေရိက ဘာသာစကားများဖြင့်
စပိန်: América Latina သို့ Latinoamérica
ပေါ်တူဂီ: América Latina
ပြင်သစ်: Amérique latine
↑ Includes the population estimates for South American and Central American countries excluding Belize, Guyana, the United States, and Spanish and French speaking Caribbean countries and territories, as listed under "Sub-regions and countries"
↑ Not including Anglophone, Francophone or Dutch-speaking countries, such as Belize, Guyana, Suriname and Jamaica; see Contemporary Definitions section
↑ ၁.၀ ၁.၁ "World Development Indicators: Rural environment and land use"၊ World Development Indicators, The World Bank၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ ၁၂ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၃ တွင် ပြန်စစ်ပြီး
↑ ၂.၀ ၂.၁ World Population Prospects, The 2015 Revision: Key Findings and Advance Tables 13–17။ United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division (July 29, 2015)။ January 1, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၃.၀ ၃.၁ Global Metro Monitor 2014။ Brookings Institution။ 22 January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Phelan (1968), p. 296.
↑ María Alejandra Acosta García; Sheridan González, Ma. de Lourdes Romero, Luis Reza, Araceli Salinas (June 2011)။ "Three"။ in CONALITEG (ed.)။ Geografía, Quinto Grado (Geography, Fifth Grade) (Second Edition ed.)။ Mexico City: Secretaría de Educación Pública (Secretariat of Public Education)။ pp. 75–83။ |access-date= က |url= ကို လိုအပ်သည် (အကူအညီ)CS1 maint: multiple names: authors list (link) CS1 maint: extra text (link)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=လက်တင်အမေရိက&oldid=718660" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၅:၅၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။